Mujaahid Soomaali ah oo Ku Shahiiday Dalka Suuriya isagoo Ka Barbar Dagaalamaya Jabhadda Al Nusrah..
Video+Sawirro: Taliban oo dhulka soo dhigtay diyaarad ay la socdeen Saraakiil American ah.
Dhageyso: Xalqada 9aad ee Barnaamijka Dhulkii Awoowayaasheen Yaa soo dhicin doona?.
Daawo Video: Alkataa'ib oo baahisay dardaaranka dagaalyahankii Weeraray Hotel SYL.
Weerar 20 Askari lagu dilay oo ka dhacay xuduudda Maali iyo Muritaaniya.
Nin Wada shaqeyn lalahaa Sirdoonka Mareykanka oo Muqdisho lagu dilay.
Farmaajo oo 2 todobaad gudahood socdaal ku tagay dalka Eritrea.
Monday March 30, 2015 - 09:50:34 in Wararka by Super Admin
Dagaalkii cuslaa ee dhawaan ka dhacay magaalada Idlib ee wadanka Suuriya ayaa lagu dilay mujaahid soomaali ah oo muddo sanada ah ka jihaadayay wadankaasi.
Wararka Suuriya ka imaanaya ayaa xaqiijinaya in uu shahiiday Abuu Khaalid Alsoomaali oo kamid ahaa dhalinyarada muslimiinta ee ka tegay dalka Ingiriiska waxaana lagu dilay dagaal malxamad ahaa oo mujaahidiinta Jabhadda Al Nusrah iyo xoogaga Kacdoonka Suuriya ku furteen Idlib.
Ragga firfircoon ee soo tebiya kacdoonka Suuriya ayaa baraha bulshada ku xaqiijiyay istish-haadka Abuu khaalid Alsoomaali oo ahaa mujaahid ku sifoobay akhlaaq wanaag iyo geesinimo dheeri ah.
Abuu Khaalid ayaa goob joog usoo noqday dagaallo dhowr ah oo mujaahidiintu Suuriya kula galeen nidaamka dabadhilifka Bashaar Al-asad madaxda ka yahay wuxuuna katirsanaa Jabhadda Alnusrah ee xariirka la leh Urur weynaha Al Qaacidda.
Tobaneeyo dhalinyaro soomaali ah oo ka tegay wadamada reer galbeedka ayaa ka dagalamaya Suuriya iyo Ciraaq,sanaddii lasoo dhaafay ayay shahiideen ku dhawaad 30 kamid ah dhalinyaradaasi iyagoo ka barbar dagaalamayay dowlada islaamiga ah.
Cudur halis ah oo kusii faafaya magaalooyinka dalka Shiinaha [Warbixin].
Dhageyso: Soomaalida ku dhaqan dalka Shiinaha oo ka hadlay Cudurka halista ah ee Coronavirus.
Dhulgariir dad badan ay ku dhinteen oo ka dhacay dalka Turkiga.
Trump oo markale ku celiyay in ciidamadiisu aysan ka bixi doonin dalka Ciraaq.
Duqeymo 27 qof ay ku dhinteen oo ka dhacay Waqooyiga Suuriya.
Dowladda Turkiga oo sheegtay in uu damac uga jiro sidii ay Shidaal uga baari laheed Soomaaliya.
Dhageyso: Dood xiisa leh oo ku saabsan isbedelka ku yimid dhaqanka Soomaalida ee dhanka Nolosha.
Ciidamada AMISOM oo qof Shacab ah ku dilay duleedka degmada Janaale [Sawirro].
28/12/2019 - 08:58:32
Sawirro: Ayax Raxan Raxan usocda oo ku degay Beeraha degmada Tayeegloow Ee gobolka Bakool.
26/12/2019 - 19:26:15
Sawirro: Xoolaha Zakada ee sanadka 1441 oo laga qeybiyay Wilaayada Galguduud.
26/12/2019 - 19:23:15